दुई लाख घुस लिदै गर्दा राजस्व अनुसन्धान प्रमुख पक्राउ | Nagarik News - Nepal Republic Media
मंगलबार विहान साढे १० बजेतिर बुटवल उपमहानगरपालिका वडा न. १३ बुद्धचौकमा गुड्का व्यवसायी अनिलकुमार झासँग घुस रकम लिदै गर्दा तेस्रो पक्षबाट आएको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान प्रमुखलाई पक्राउ गरिएको हो । बुटवल १३ नयाँगाउँमा राजस्व अनुसन्धान बुटवलको कार्यालय रहेको छ ।
कार्यालय नजिकै घुस रकम लिने बिषयमा बार्गेनिङ भइरहेको सूचना आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलको टोली त्यहाँ पुगेको प्रमुख डा. भिष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । उनले पक्राउ गरिएका रानालाई थप कारवाहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
यसअघि सोमबार बाँके निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराई र सहायक संरक्षण अधिकृत विष्णु रोकायालाई ८ लाख ९८ हजार श्रोत नखुलेको रकमसहित पक्राउ गरेको थियो । श्रोत नखुलेको भनिएको उक्त रकम कमिशन वापत आएको सूचनाका आधारमा पक्राउ गरि थप कारवाहीका लागि अघि बढाइएको अख्तियार बुटवल कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७७ १४:१० मंगलबार